जीवाणुहरु को नकारात्मक र सकारात्मक भूमिका
मात्रात्मक मामलामा, सानो जीवित जीव - सबैभन्दा धेरै देशमा को बासिन्दाहरूलाई, को समुद्र, वातावरण। वैज्ञानिकहरू अनुसार, माटो को केवल एक ग्राम सय भन्दा बढी एक लाख जीवाणुहरु समायोजित गर्न सक्छन्। र भूमि को बन्दोबस्त को सम्बन्ध मा जीव एक आदरणीय पहिलो स्थान कब्जा। आखिर, तिनीहरूले 3.7 अरब वर्ष पहिले ग्रह मा देखियो। र तिनीहरूलाई केही पनि परिवर्तन सानो देखि छ! को के हो प्रकृति मा जीवाणुहरु को भूमिका? जसमा वैश्विक प्रक्रियाहरू संलग्न, यी सूक्ष्म जीव? जो मान्छे सहयोगी र जो मानव शरीर लागि हानिकारक छन्? यी सबै प्रश्नहरु यस लेखमा संक्षिप्त जवाफ दिन प्रयास गर्नेछ।
जीवाणुहरु बारेमा सानो
प्रकृति, एक जीवाणुहरु सिर्जना अभूतपूर्व मार्जिन र ग्रह पृथ्वीको अन्य बासिन्दाहरूलाई को सबै भन्दा देखि हराएको धेरै गुणहरू तिनीहरूलाई प्रदान। तिनीहरूले उच्च र कम तापमान withstanding सक्षम छन्, सजिलै लगभग अक्सिजन बिना, उच्च र कम वायुमण्डलीय दबाव मा अवस्थित। सूक्ष्मजीवहरु अपरिचित, अझै लाज क्षेत्रहरूमा मा फिक्सिंग, नयाँ दुनिया को बन्दोबस्त को लागि अभिप्रेरित भने। एक एकदम आदिम संरचना संग - जीवाणुहरु बल को एक विशाल आरक्षित छ (सबै भन्दा celled), तिनीहरूले सायद जीवनको ज्ञात विद्यमान प्रकारका सबैभन्दा प्रभावकारी छन्।
जहाँ तिनीहरूले बाँच्न
भूमि मा, समुद्रहरू र समुद्र मा, हावा र पनि अन्य जीव भित्र: यी जीव तिनीहरूले जताततै पाइन्छन्, हर एक ठाँउ हो। तिनीहरूले एउटा ठूलो भीड हो, असंख्य। यो बावजुद जीवाणुहरु हालै मात्र, बन्न "परिचित" व्यक्ति अप्टिकल उपकरणको आविष्कार पछि, वस्तुहरू वृद्धि गर्छ। त्यसपछि वैज्ञानिकहरू तिनीहरूले भन्न रूपमा, व्यक्तिगत तिनीहरूलाई हेर्न सक्षम थिए। र अघि जीवाणुहरू को विशाल colonies सबै मानिसजातिमाथि unnoticed, नदेखिने मदत वा पैदा हानि अस्तित्व। प्रकृति मा जीवाणुहरु को भूमिका के हो? तिनीहरूलाई कुन मदत गर्दै छन्, र के हानि? गरेको सूक्ष्मदर्शक यन्त्रमुनिको हेरौं!
जीवाणुहरु को सकारात्मक भूमिका
ग्रह यी प्राचीन बासिन्दाहरू विशेष सामान्य मा सारा संसार ठूलो लाभ र मानवता ल्याउन, आफ्नो वासस्थानमा क्षेत्र ख्याल देखिन्थे। प्रकृति, वातावरण, मानव: जीवाणुहरु को सकारात्मक भूमिका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रहरू मा देख्न सकिन्छ। हामीलाई ती प्रत्येक विचार गरौं।
यो कुरा जीवाणुहरु धेरै "caretakers", को बकवास को प्रकृति सफाई को क्रमबद्ध रूपमा अन्य प्राणीहरू को मृत्यु रहलपहल खाने र फोहोर उत्पादन जम्मा गर्न अनुमति छैन भन्ने छ। विज्ञान, यस घटना saprotroph भनिन्छ। संसारको बस बर्बाद को आम मा डकगरिएको थियो जीवाणुहरु यस प्रकारको बिना स्थायी को disposed गर्न। धेरै सूक्ष्मजीवहरु, नर्स रूपमा अभिनय के हो।
र यी को रूप मा cyanobacteria, पहिले गलती शैवाल भनिन्छ, photosynthesis भाग लिन सक्षम छन्। यस प्रकारका जीवाणुहरु को सकारात्मक भूमिका अक्सिजन ठूलो उत्पादन हो। वैज्ञानिकहरूले प्रारम्भिक समयमा यी सानो जीव पृथ्वी वातावरण गठन गर्न थाले निर्धारित छ। फलस्वरूप, यो हामी यसको महसुस गर्न accustomed छन् बस तरिका थियो। निस्सन्देह, आधुनिक वातावरणमा photosynthesis द्वारा अक्सिजन मात्र होइन नीलो-हरियो शैवाल उत्पादन। को मुद्दहरुलाई र सिंहको शेयर अझै - तिनीहरूलाई पछि। र यो तिनीहरूले आज अवस्थित जसमा फारममा ग्रह मा वनस्पति र जीव को गठन गर्न यी जीवाणुहरु बिना असम्भव थियो।
पदार्थ को परिसंचरण
जीवाणुहरु अर्को सकारात्मक भूमिका - प्रकृति मा पदार्थ को एक विश्वव्यापी परिसंचरण मा सहभागिता। भूमि र समुद्र मा, हावा मा निरन्तर तत्व को वैश्विक विनिमय जाँदै। ग्रह पृथ्वी मा सबै पदार्थ अर्को एक जीव देखि सार्दै हुनुहुन्छ। सूक्ष्मजीवहरु बिना यस्तो संक्रमण बस असम्भव भएको थियो। सबैभन्दा अध्ययन विज्ञान नाइट्रोजन चक्र प्रक्रिया, धेरै कदम हुन्छन् जो: fixation, ओक्सीकरण, कमी (rotting वा ammonification द्वारा)। सबै तीन अवस्थामा मा, प्रक्रियाहरू जीवाणुहरु केही समूह द्वारा बाहिर छन्। यो nodule र प्रोटिनको अपघटन र रूपान्तरण प्रक्रिया संलग्न एरोबिक सूक्ष्मजीवहरु। वैज्ञानिकहरूले प्रजनन र कार्बन डाइअक्साइड, सल्फर, फलाम, र फस्फोरस को परिवर्तन यी सानो-प्राणीहरू को सहभागिता पहिचान छ। हाल यी घटना थप छानबिन अन्तर्गत।
जीवित जगतले शक्ति को सन्दर्भ मा जीवाणुहरु को भूमिका के हो? यी जीव microscopically सानो हो भन्ने तथ्यलाई बावजुद, तिनीहरूले ठूलो प्राणीहरू केही लागि खाना रूपमा सेवा गर्छन्। जो, बारी मा, अरूलाई खान्छन्। निस्सन्देह, उदाहरणका लागि, मान्छे को लागि छैन आहार को एक महत्वपूर्ण भाग रूपमा जीवाणुहरु छन्। तर अप्रत्यक्ष हामी पनि noticing बिना, यो खान गर्छन्। एक हडताली उदाहरण - खाद्य संरक्षण बैरल, र सारा "kislomolochka" (बाटो, बियर र वाइन द्वारा पनि जीवाणुहरु र Fungi को काम को परिणाम हो)। सधैं संसारको मानिसहरूका राष्ट्रिय भोजन मा वर्तमान समान उत्पादनहरु।
जीवाणुहरु (एक मानिस को लागि) को जीवन मा भूमिका के हो? को पेट मा रहन सूक्ष्मजीवहरु राम्रो-natured र अनुकूल "छिमेकी" हो। यी Bifidobacterium र Bacteroides र समावेश Escherichia कोलाई, enterococci, lactobacilli। ती सबै उपयोगी microflora बनाउन र सुरक्षा र पाचन कार्य पूरा। यो सबै पेट सूक्ष्मजीवहरु मा तीन किलोग्राम वजन कि फेला परेन। यो धेरै प्रतिशत मामलामा धेरै छ।
जीवाणुहरु को नकारात्मक भूमिका
तर यी सूक्ष्मजीवहरु वातावरण प्ले र मानव जीवन केवल सकारात्मक भूमिका छैन। हाम्रो शरीर, केही जीवाणु (लगभग 1%) कुनै परिस्थितिमा एक pathogenic प्रभाव हुन सक्छ छन्। ठूलो खतरा fraught परजीवी रोगजनकों संक्रामक रोगहरु पैदा गर्न सक्छ: .. विपत्ति, हैजा, आदि कम खतरनाक रोगहरु एनजाइना, पल्मोनरी सुनिंनु सकिन्छ। त्यसैले, सायद, वैज्ञानिकहरू नियन्त्रणमा यी साना किरा राख्न रुचाउँछु।
जीवाणुहरु अर्को नकारात्मक भूमिका - भ्रष्ट खाद्य आफ्नो संलग्नता। केही अवस्थामा, तिनीहरूले खाना राम्रो द्रुत समय फ्रिज बाहिर बायाँ "खान" गर्न सक्षम छन्। कि पछि, मान्छे को लागि, यी उत्पादनहरु प्रयोग गर्न अयोग्य भएका छन्।
कोरल polyps - को reefs को बिल्डर्स।
चिसो मानिस: प्रविधि, उपकरण। प्रयोग मान्छे चिसो
ध्वनि हावा मा गति
विजेता - एक नोबेल पुरस्कार विजेता ...
Alkanes को रासायनिक गुण
व्यक्तिगत को ड्राइभ र खोज गतिविधि को तुलनात्मक विश्लेषण
चीन, शेन्जेन: इतिहास, ठाँउहरु, फोटो
पकाउने जाम र जेली स्टार्च रूपमा: चरण स्वादिष्ट पेय नुस्खा
एक बच्ची सही लागि विकल्प रूपमा
म मेरो पृष्ठ "VKontakte" भ्रमण गर्ने कसरी थाहा छ?
"रोल अप" - यो एक अमूल्य सान्त्वना छ
Polyurethane silentblocks: समीक्षा, चश्मा, फोटोहरू
आगो बेला विद्यालयमा आचरण को नियम: ज्ञापन शिक्षक र विद्यार्थी
द्रवणबिन्दु - सबैलाई मा
कविता र गीतहरू एक अर्थमा साथी बारेमा उद्धरण
जोरजियन महिला नाम: anthroponymic इतिहास
खेल "हरर कथाहरू: छैटौं Sense": खण्डमा। "हरर कथाहरू: छैटौं Sense": विशेषताहरु
कसरी Huskies हेरचाह गर्न: अपार्टमेंट, खाना, को सानो खेत को सामाग्री। कर्कश puppies